Tụnyere nke kacha mma ama ese foto na ahịa: Huawei P20, iPhone X na Samsung Galaxy S9 + | Akụkọ akụrụngwa
Ụlọ Ignatius | | Foto, Mobiles
Elu-elu na ụwa nke mobile telephony kemgbe Apple na Samsung na-edu, ọ bụ ezie na n’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ abụrụla ndị na-emepụta ihe nke gbalịrị ime ka ịwụfu otu n’enweghị ihe ịga nke ọma. LG na Sony bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị nwara ma daa n'akụkụ ụzọ. Huawei bụ onye mgba ọhụrụ na-anwa ịbanye na nke a maka ndị kasị ukwuu.
Onye na-emepụta Asia, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya na-eme nke ọma ma taa anyị nwere ike ịtụle ya dị ka njedebe dị elu maka arụmọrụ na nkọwa. Iji gbalịa idozi obi abụọ na ngalaba foto, otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke ngwaọrụ ndị a, anyị na-enye gị n'okpuru a atụnyere igwefoto nke nnukwu atọ nke telephony: iPhone X, Samsung Galax S9 na Huawei P20.
1 Igwefoto IPhone X
2 Samsung Galaxy S9 + igwefoto
3 Igwefoto Huawei P20
4 Eserese esere ese di na iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20
5 Nkọwa n'etiti iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20 n'ime ụlọ
6 Nkọwa n'etiti iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20 n'èzí
7 Nkọwa n'etiti mbugharị nke iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20
Igwefoto IPhone X
The iPhone X abụrụla ihe edepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 99% nke ndị nrụpụta gam akporo n'ihi ọkwa ebe teknụzụ niile dị mkpa jikọtara iji nwee ike iji usoro nyocha ihu iji nwee ike ịmepe ngwaọrụ ahụ na mgbakwunye na ibelata okpokolo agba niile ngwaọrụ max. Sistemụ igwefoto nke iPhone X, mee ya ngwa ngwa 12 mpx sara mbara nwere oghere nke f / 1,8 yana oghere telephoto, yana 12 mpx na oghere nke f / 2,4, nke anyị nwere ike iji iji anya anya mee ihe ruo mmụba 2 na-enweghị ida ogo na foto ahụ n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị ejiri mbugharị dijitalụ, ọ ga-eru 10x.
Ihuenyo iPhone X, nke mbụ Apple na-ebupụta n'ahịa dị ka OLED (nke Samsung rụrụ), bụ 5,8 sentimita asatọ, nwere mkpebi nke pikselụ 2.436 x 1.125 na njupụta nke 458 ntụpọ kwa anụ ọhịa ma na-enye gamut agba agba (P3). N'ime anyị na-ahụ A11 Bionic processor, a 64-bit processor na a neural engine na Bilie a ngagharị coprocessor. A11 Bionic na-esonyere 3 GB nke RAM, karịa ebe nchekwa zuru ezu iji bugharịa usoro ahụ na oke mmiri, ihe na ọnụego RAM anyị enweghị ike ịchọta na ọdụ ọ bụla nke gam akporo na-achịkwa.
Samsung Galaxy S9 + igwefoto
N'agbanyeghị nkatọ nke Galaxy S9 + natara maka ịnye akwụkwọ akụkọ ole na ole na ọkwa ọhụrụ ya, ihe nlereanya a na-enye anyị dịka isi ọhụụ igwefoto abuo n'azụ, igwefoto abuo nwere oghere imeghari site na f / 1,5 ka f / 2,4. N'ihi oghere a, anyị nwere ike ịnweta onyogho doro anya nke ezigbo mma ma nwee nke anyị nwere ike ijide obere ọkụ na-enweghị agba agba gbanwere ma ọ bụ nkọ.
Igwefoto abụọ ahụ na-enye anyị mkpebi nke 12 mpx na teknụzụ Dual Pixel ma jikọta ihe nyocha ngwa anya. Nke mbụ na-enye anyị oghere mgbanwe sara mbara, ebe nke abụọ na-enye anyị ihe edozi nke f / 2,4 ma jiri ya dị ka lens telephoto. Igwefoto n'ihu bụ 8 mpx na-elekwasị anya na akpaka na-enye anyị oghere nke f / 1,7, ezigbo maka iji onwe gị na obere ọkụ na-enweghị iji nweta flash nke ụfọdụ ụdị jikọtara n'ihu ngwaọrụ ahụ.
Ihuenyo nke Samsung Galaxy S9 + ruru 6,2 sentimita asatọ, nwere mkpebi QHD + na njupụta pixel nke 570 na nhazi ihuenyo nke 18,5: 9. N'ime, Samsung ejirila Exynos 9810 na nsụgharị European ma na nke American na China, ọ họrọla Qualcomm Snapdragon 845. 6 GB nke RAM na ihu ihu iji kpọchie ọnụ bụ ụfọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ nke ọdụ a na-enye anyị maka Galaxy S8 +.
Igwefoto Huawei P20
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na n'ihe gbasara arụmọrụ P20 nlereanya "naanị" anyị enweghị ike iji ya tụnyere iPhone X na Samsung Galaxy S9 +, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ogo igwefoto, mgbe anwalechara ya ụbọchị ole na ole, dị ka Galaxy S9 + na iPhone X, echere m na ọ dị mkpa ịnye ntụnyere, iji gosipụta otu mma bụchaghị ọnụ. Banyere imewe, ụlọ ọrụ Asia ahọrọla otu ụzọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 99% nke ndị nrụpụta gam akporo, ọ nweghịkwa ihe ọzọ karịa idetuo maka enweghị ihe kpatara ọkwa nke mepụtara iPhone X n'agbanyeghị na ọ bụghị ọdụ mbụ iji gaa ahịa ọkwa ahụ, dị ka nsọpụrụ na-aga Andy Rubin ekwentị dị mkpa.
Ihuenyo nke ọnụahịa a ruru 5,85 sentimita asatọ LCD na usoro 18,5: 9 na mkpebi nke 2.244 x 1.080. N'ime anyị na-ahụ Kirin 970 processor esonyere 4 GB nke Ram, USB-C ụdị njikọ na akara mkpisiaka agụ na n'ihu. Igwefoto n'ihu rutere 24 mpx nwere oghere f / 2,0 dịtụ elu iji were selfies na obere ọkụ. Huawei na-enye anyị eserese abụọ n'azụ na ụdị P20, igwefoto mpx 20 mpx na igwefoto 12 mpx RGB, yana oghere nke f / 1,6 na f / 1,8 n'otu n'otu, nke na-enye anyị ohere inweta ihe oyiyi na ọkụ ọkụ dị ala na-arụpụta ezigbo nsonaazụ.
Eserese esere ese di na iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20
Ọnọdụ eserese ma ọ bụ mmetụta bokeh nke Apple gosipụtara na mwepụta nke iPhone 7 Plus, enweghị ike ịnweta naanị ekele maka igwefoto abụọ, ọ bụ ezie na ọ na-enyere ọtụtụ aka, ebe ọ bụ na emere njide ahụ, ọ na-agafe na ngwanrọ ngwanrọ nke na-ewe elekọta nyochaa ihe oyiyi niile ma mechie ihe niile dị na ndabere nke ihe oyiyi ahụ, hapụ naanị isiokwu a ga-egosipụta na nlebara anya. A na - ahụta ihe atụ doro anya nke mkpa maka oghere abụọ iji nweta nsonaazụ a n'ọgbọ nke abụọ Google Pixel.
Samsung Galaxy S9 - Ọnọdụ eserese
iPhone X - Ọnọdụ eserese
Huawei P20 - Ọnọdụ eserese
Ọ bụ ezie na ịbụ onye izizi ịmalite ọrụ ma ọ bụ jiri teknụzụ n'ụzọ ụfọdụ apụtaghị na ọ bụ nke na-enye nsonaazụ kacha mma, n'echiche a Apple ka bụ eze na-enweghị mgbagha na ntụnyere a mgbe anyị na-ekwu maka eserese mode. Dị ka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo ndị dị n'elu, iPhone X ya na ọnọdụ eserese ya bụ ọnụ na-enye ihe ngosi kachasị mma nke eserese eserese, nke Samsung Galaxy S9 + sochiri, ya na ụdị nzuzu, mana nke ahụ adabaghị na mpaghara ụfọdụ.
Huawei P20 bụ ọnụ na-enye nsonaazụ kacha njọ mgbe ị na-eji ọnọdụ eserese, ebe ọ bụ na njupụta ọ na-enye anyị dị elu na anaghị amanye anyị ilekwasị anya n’ihe ahụ anyị chọrọ ka a mata na nwudo ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-eme ka onyinyo ahụ jupụta nke ukwuu, ọ naghị enye anyị agba agba nke kwekọrọ na eziokwu.
Nkọwa n'etiti iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20 n'ime ụlọ
iPhone X - Ime
Galaxy S9 Plus - Ime
Huawei P20 - Ime
Na ntụnyere a, anyị hụrụ etu iPhone X, dị ka ndị bu ya ụzọ, na-acha odo odo. Banyere ọka, Apple ọnụ na-enye anyị a dị nnọọ elu ọka tụnyere ndị ọzọ ọnụ tụnyere, ebe ọka bụ fọrọ nke na-abụghị.
Huawei P20 kachasị mma na-akpa àgwà mgbe ị na-atụle oke ọkụ mgbe enwere mpaghara abụọ nwere ọkụ dị iche iche, mana nke ahụ metụtara akụkụ fọdụrụ nke onyonyo ahụ, site na igosi oke mkpọtụ na akụkụ aka ekpe nke onyinyo ahụ, yabụ nsonaazụ ikpeazụ na-emebi njide dị ka ihe niile.
Dị ka atụ anya, Samsung Galaxy S9 Plus bụ ọnụ na-enye anyị nsonaazụ kacha mma n'ime ụlọ, egosiputa nkpu nkpuru obula (nkpuru) na ebe ndi nenweghi oku (ebe igodo), ma di oke nma n’agbanyeghi onodu oku, obu ezie na mpaghara nwere otutu ihe di iche, ihe esi na ya puta bu ihe ichoro, kama o weputara dika ihe oyiyi ahụ anaghị eme ọtụtụ mgbe.
Ihe niile edere na ntụle a dị na mkpebi mbụ ha na arụbeghị dijitalụ ka ị wee hụ ihe nsonaazụ nyocha ahụ.
Nkọwa n'etiti iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20 n'èzí
iPhone X - Mpụga
Samsung Galaxy S9 Plus - Mpụga
Huawei P20 - Mpụga
Ihe njedebe atọ ahụ na-enye anyị ihe kariri anakwere di eluỌ bụ ezie na iPhone X na Huawei P2o dịtụchara agba, na-eme ka ha sie ike karịa ka ha dị, ihe anyị nwere ike ịhụ ma na mbara igwe ma na ụlọ ndị dị n'azụ. Ọ bụ ezie na mkpọtụ ekwesịghị ịdị na foto a, yana ọkụ ọkụ zuru oke, iPhone X na-ejikwa igosi mkpọtụ na mpaghara nke agba agba agba odo, dị ka Huawei P20 ọ bụ ezie na ọ pere mpe.
Ọzọkwa, ọ bụ Samsung Galaxy S9 Plus bụ ụdị nke na-enye anyị nsonaazụ kacha mma, na-enweghị ọnụnọ n'oge ọ bụla nke mkpọtụ ma nwee oke nkọ. Ọ bụrụ na ọ siri ike ịkụ igwefoto mara mma nke Samsung rụpụtara na Galaxy S8 na S8 Plus afọ gara aga, ule ndị a na-egosi anyị dị ka a ga - asị na ọ ga - ekwe omume ịkwalite ya na ndị ọzọ.
Nkọwa n'etiti mbugharị nke iPhone X, Samsung Galaxy S9 + na Huawei 20
Huawei P20 - Mbugharị
Samsung Galaxy S9 - Mbugharị
iPhone X - Mbugharị
N'ịhapụ, ọnọdụ dị omimi nke anyị tụlerela na ngalaba gara aga na nke gosipụtara na foto ndị a, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mbugharị anya, ma iPhone X na Samsung Galaxy na-enye anyị nnukwu nkọ mgbe ọ na-ebuwanye ibu ma nwee ike ịgụ akara uhie nke dị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Iji mepee onyinyo ahụ ejiri Huawei P20 buru ibu, akwụkwọ mmado ahụ egosighi anyị nkọ nke anyị nwere ike ịhụ na ọdụ abụọ ndị ọzọ, nke na-amanye anyị ịdọpụ anya anyị ka anyị nwee ike ịgụ nke ọma.
Ihe niile edere na ntụle a dị na mkpebi mbụ ha na arụbeghị dijitalụ ka ị wee hụ, ụzọ aka, nsonaazụ nyocha ahụ.
Mgbe anyị nyochachara ihe ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ mere na iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus na Huawei P20, anyị bịara nkwubi okwu na akara kpakpando nke Samsung maka afọ a, Galaxy S9 Plus na-enweta mmeri site na oke ọdịda na edemede niile, ịbụ igwefoto kachasị mma nke ụdị atọ a, ya mere, na ahịa. Mkpụrụ osisi dị elu nke iPhone X na-egosi anyị, ọbụlagodi na onyogho na-enwu gbaa na-akụda mmụọ na-atụle ọnụahịa nke ọnụ ọnụ ya na igwefoto iPhone bụ mgbe niile akwụkwọ na ahịa. Ruo afọ ole na ole, àgwà ya adabala na Samsung ka toro nke ọma.
Igwefoto Huawei P20, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-achịkwa nke ọma na onyonyo dị elu dị elu, n'otu ihe ahụ mepụta mmetụta dị egwu ma gbakwunye mkpọtụ na okwesighi idi na mpaghara ahu. Tụkwasị na nke ahụ, nkọ igwefoto na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ, otu akụkụ nke kwesịrị iburu n'uche maka ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu. Enweghị m ohere ịnwale igwefoto nke Huawei P10, nke onye ọ bụla na-agbagharị, ma ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ dị ala karịa nke ihe nlereanya a, ụlọ ọrụ Asia ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na nke a, ọ bụ ezie na Leica bụ, e chere, n'azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Tụnyere nke kacha mma ama ese foto na ahịa: Huawei P20, iPhone X na Samsung Galaxy S9 +
Huawei weputara ohuru ya nke ohuru nke 2018: ekwenti abuo nwere ezi oru ya na onu ahia ya